EMUI 10 beta ကိုလက်ခံရန် Huawei နှင့် Honor ဖုန်း ၇ လုံးအားအတည်ပြုပြီးဖြစ်သည် Androidsis
အဆိုပါ Huawei နှင့် Honor ဖုန်း ၇ လုံးသည် Android 10 ပေါ်တွင်အခြေခံထားသော EMUI 10 beta ကိုအတည်ပြုပြီးဖြစ်သည်
Huawei သည်မကြာသေးမီလများက EMUI 10 ၏တည်ငြိမ်မှုနှင့် beta မျိုးကွဲများနှေးကွေးခြင်းကြောင့်ပြီးခဲ့သည့်လများအတွင်းသုံးစွဲသူများကိုမပျော်ခဲ့ပါ။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်သြဂုတ်လတွင်စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။
ဒီ interface ကိုလက်ခံရရှိထားပြီးဖြစ်သောစမတ်ဖုန်းများစာရင်းသည်သိပ်မတိုသော်လည်း၊ EMUI ၁၀ ၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုခံစားနိုင်ပြီးသုံးစွဲသူအနည်းငယ် (အတော်အတန်) နည်းသည်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးတွင်သုံးစွဲသူ ၁၀ သန်းမျှသာရှိသည် သူတို့သက်ဆိုင်ရာမော်ဒယ်များတွင်အငူရှိပြီးသားများဖြစ်သည်။ သန်းပေါင်းရာချီသောစမတ်ဖုန်းသုံးစွဲသူများအားတရုတ်ကုမ္ပဏီသည်ကမ္ဘာတဝှမ်း၌ရှိသည်ဆိုသောအချက်ကိုကြည့်လျှင်ထိုအရေအတွက်သည်နည်းပါးနေသည်။
Huawei ၏ Android Q-based EMUI 10 ကိုဖုန်း ၇ လုံးထပ်မံတိုးချဲ့ရန်ရှိသည်Weibo ၏တရားဝင်အကောင့်အတည်ပြုခဲ့သည် Huawei နှင့် Honor စက်လေးလုံးသည်ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၀၂၀ တွင် beta စမ်းသပ်ခြင်းတွင်ပါ ၀ င်မည်ဖြစ်ပြီးနောက်သုံးလအကြာတွင်အစီအစဉ်တွင်ပါ ၀ င်မည်။ ဒီမှာအပြည့်အစုံပါ
1 ဖေဖော်ဝါရီလ 2020
လက်ရှိတွင် တရုတ်ဆော့ (ဖ်) ဝဲ (လ်) မရှိသောဖုန်းများသာဖုန်းပေါ်ရှိ community app မှတဆင့်ပိတ်ထားသော beta ကိုချိတ်ဆက်နိုင်သည် EMUI ၁၀ ကိုလက်ခံရရှိရန်အနာဂတ်တွင်အခြားစမတ်ဖုန်းများမည်သည့်အရာများပါ ၀ င်မည်ကိုစောင့်ကြည့်ရ ဦး မည်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ တရုတ်ထုတ်လုပ်သူများအနေဖြင့်လည်းအခြားဆိပ်ကမ်းများထပ်မံထည့်သွင်းရန်လုပ်ဆောင်နေသည်မှာ Honor လည်းလုပ်ဆောင်သင့်သည်။ လာမယ့်ရက်များ (သို့) ရက်သတ္တပတ်များတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းများထပ်မံရရှိလိမ့်မည်။ ယခုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် Huawei ၏ update service ကိုပိုမိုမြန်ဆန်ရန်စောင့်ဆိုင်းနေရဆဲဖြစ်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » အဆိုပါ Huawei နှင့် Honor ဖုန်း ၇ လုံးသည် Android 10 ပေါ်တွင်အခြေခံထားသော EMUI 10 beta ကိုအတည်ပြုပြီးဖြစ်သည်
Alberto del angel ဟုသူကပြောသည်
ငါ EMUI10 ကိုငါ့ Huawei pro30 lite အတွက်လပေါင်းများစွာစောင့်နေခဲ့တာဖြစ်ပြီးစာရင်းထဲမှာပါတာနဲ့ငါ update ကိုမရခဲ့ဘူး။ ဘယ်အချိန်ရောက်မှာလဲ။
Alberto Del angel သို့ပြန်သွားပါ
Huawei p30 lite အတွက် EMUI 10 ၏နောက်ဆုံးသတင်းကိုစောင့်ဆိုင်းနေပါတယ်၊ သူတို့ကအချိန်ကိုထုတ်ဝေခဲ့ကြပေမယ့်မရောက်ရှိပါဘူး။ သင့်ရဲ့အဖြေကိုစောင့်ပါ။
Rodrigo Brizuela ဟုသူကပြောသည်
Ahh Huawei သည်သင်ပူပန်ရမည့်အချက်မှာသင်၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ mid-range ထုတ်ကုန်များဖြစ်သော Y နှင့် P လိုင်းများ (အလယ်အလတ်အဆင့်) ကိုအဆင့်မြှင့်ခြင်းဖြစ်သည်။
Rodrigo Brizuela အားပြန်ပြောပါ
Jaime Gomez ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်တော့်ရဲ့ Huawei y109အတွက် emui 2019 ကိုစောင့်နေပါတယ်
ကီဗင် Najamtai ဟုသူကပြောသည်
ဘယ်အချိန်မှာ Huawei Mate 20 lite?
Kevin Najamtai ကိုပြန်ပြောပါ
Huawei ကတော့ Mate 20 Pro ကိုစက်ရုံကနေထုတ်လွှတ်လိုက်ပြီဆိုတော့ update မရသေးဘူး။
Fatima leza ဟုသူကပြောသည်
ငါ Huawei P Smart 2019 အတွက် update ကိုစောင့်နေပါတယ်
Fatima Leza သို့ပြန်သွားပါ
ငါသည်လည်းလပေါင်းများစွာငါ့ p30 lite ကိုအပေါ် update ကိုစောင့်ဆိုင်းနေခဲ့ကြရတယ်
yamid giraldo ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါကောင်းသောနေ့လည်ခင်း။ ငါချုပ်ချုပ် 2019 အတွက်လည်းအသစ်ပြောင်းခြင်းရှိပါသလား။
Yamid giraldo အားပြန်ကြားပါ
ငါ update ကိုစောင့်ဆိုင်းနေပါတယ်, ငါ၌ Nova 5T ရှိသည်နှင့်အခြားဖိုရမ်များတွင်က update လုပ်ပြီးသားခဲ့ဟုဆိုသည်
ငါ Honor 8x ရှိတယ်၊ ဘယ်အချိန်မှာ update မလဲ?
ငါဖုန်း၏ update ကိုစောင့်ဆိုင်းနေပါတယ် Huawei y9 2019 ငါအဖြေကိုစောင့်သည်
ကျွန်ုပ်၌ Huawei mate 20 lite ရှိသည်၊ ၎င်းသည်အသစ်မွမ်းမံထားခြင်းမရှိသေးပါသို့မဟုတ်၎င်းကိုလုပ်ဆောင်ရန်စာရင်းတွင်ကျွန်ုပ်မတွေ့ပါ
ပြီးခဲ့သည့် နှစ်မှစ၍ ကျွန်ုပ်သည်စောင့်ဆိုင်းနေခဲ့ပြီးဘာမျှမဖြစ်ခဲ့ပါက၎င်းသည်မိုက်မဲသောအရာများထုတ်ဝေရန်မမှန်ပါကကျွန်ုပ်၌ဟွာဝေအိမ်ထောင်ဖက် ၂၀ ရှိသည်။
José Lasso ကိုပြန်ပြောပါ
အချိန်ကာလအားဖြင့်အိမ်ထောင်ဖက် 20 lite tmre ငါ့ကို၏အဆိုအရစာရင်းထဲတွင်ပါလျှင်ငါသိ၏
ငါ nova3အတွက် update ကိုစောင့်နေတယ်၊ ​​ကျနော့်အမြင်ကတော့ဒီစွမ်းဆောင်ရည်အတွက်လက်ရှိအလယ်အလတ်တန်းစားအတော်များများထက်ပိုကောင်းတယ်။
နောက်ဆုံးသတင်းများကိုနှောင့်နှေးခြင်းနှင့်ကိုင်တွယ်သူများသည် CLARO, MOVISTAR သို့မဟုတ် TIGO ဟုခေါ်သောတယ်လီဖုန်းဝန်ဆောင်မှုပေးသူများဖြစ်ကြသည်။ မည်သည့်အကြောင်းပြချက်မျှမရှိဘဲ၎င်းတို့ကိုစိတ်ကြိုက်အလွှာများနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ပြင်ဆင်ရန်၊ မိုဘိုင်းဖုန်း ၀ ယ်ယူသူများသည်၎င်းတို့၏မွမ်းမံချက်များကိုလက်ခံရရှိသောအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလွတ်လပ်မှုကိုတိုက်ခိုက်ခြင်း၊ အသစ်ပြောင်းခြင်းများကိုမထုတ်ပေးပါ။ ဤတွင်ဖောက်သည်တစ် ဦး ကိုလှည့်စား typeified ဖြစ်ပါတယ်။
Huewei သည် nova 2018 နှင့်3ကဲ့သို့သော 2018 မော်ဒယ်များကိုမွမ်းမံခြင်းနှင့် Huawei သည်မိုဘိုင်းဖုန်းအားလုံးအားအနည်းငယ်သွားနိုင်ခြင်းသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်၏ nova3နှင့်တစ်နှစ်လုပ်ခဲ့ပြီး emui မရရှိခြင်းသည်မဖြစ်နိုင်ပါ။ updates 10
Ana Marcela ဖာရက် ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်၌ Huawei Mate 20 Model HMAL09 ရှိပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည် EMUI 19 သို့မွမ်းမံခြင်းကိုကျွန်ုပ်ရရှိမည်ဟုတ်မဟုတ်သိလိုပါက၎င်းကိုစီစဉ်ထားသည့်အချိန်တွင်သိလိုပါသည်။
Ana Marcela Pérezအားပြန်ကြားပါ
John Adrian C. ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ်၌ Huawe Y7-2019 ရှိသည်၊ ယနေ့အထိကျွန်ုပ်တို့၌နောက်ဆုံးသတင်းများနှင့် EMUI 10 သတင်းမရှိပါ။
Juan Adrián C. အားပြန်ပြောပါ
ရာဖေးလ် Gomez Barrios ဟုသူကပြောသည်
ငါရောက်ပြီသည့်အခါအဘို့ငါ Y9 ရှိသည်ငါ့ update ကိုစောင့်ဆိုင်းနေပါတယ်
Rafael Gomez Barrios အားပြန်ပြောပါ
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ် p30 pro အတွက် update ကိုစောင့်နေပါတယ်။ ဘာလုပ်သင့်လဲ
အဲရစ် De la Cruz Guillermo ဟုသူကပြောသည်
ငါမှာ Y9 Prime ရှိတယ်။
Erick De la Cruz Guillermo သို့စာပြန်ပါ
ငါမနှစ်ကကတည်းက emui 10 လို့ခေါ်တယ်၊ ဒါမမှန်ဘူး၊ ဘာကြောင့်ဒီလိမ်ညာမှုတွေရှိနေရတာလဲ၊ ငါမှာဟွာဝေအိမ်ထောင်ဖက် ၂၀ ရှိတယ်၊ ပိုပြီးလေးနက်တယ်။
ငါ့မှာ mate 20 လိုချင်တဲ့သူတစ်ယောက်ရှိတယ်။ ငါ update မရသေးဘူး
အခါအဘို့အ p30 ????
Rosa María calzada Santiago သို့ပြန်ပြောပါ
Armando ဟာနန်ဒက်ဇ် ဟုသူကပြောသည်
ဘယ်အချိန်အတွက် Huawei NOVA 5T
Armando hernandez အားစာပြန်ပါ
Alvaro Castañeda ဟုသူကပြောသည်
ထိုကာလအားဖြင့် Nova3update ကို
ငါနေဆဲအချိန်အတွက် mate 20 lite ကို update ကိုစောင့်ဆိုင်းနေပါတယ် .. ?
Carlos Ortiz သို့ပြန်သွားပါ
နောက်တဖန်မကြည့်ပါနှင့် - နောက်ဘက်ကင်မရာသုံးလုံးသည် Huawei P40 နှင့်အတူလာလိမ့်မည်